Ugaarsigii Yaxaaska, Steve Irwin oo lagu dilay 44 | Martech Zone
Ugaarsigii Yaxaaska, Steve Irwin waxaa lagu dilay 44 jir
Isniintii, September 4, 2006 Axad, Sebtembar 30, 2012 Douglas Karr
Sida laga soo xigtay Reuters, Steve Irwin waxaa dilay bakhayle maanta. Tacsidaydu waxay la socotaa qoyska Irwin iyo sidoo kale dhamaan wadanka Australia - Irwin wuxuu saameyn balaaran ku yeeshay deegaanka iyo dabiicada.
Waxaan rajeynayaa in dadweeynuhu aysan sidan si qaldan u qaadin, laakiin layaab iguma ahan inay tani dhacday. Marnaba kuma fikirin, markaan daawanayay bandhigiisa, in tani ay noqon doonto arrin 'if', waxay ahayd arrin fudud 'goorma'. Xitaa waxaan kala hadlay aabaheey iyo wiilkeyga arintaas… waan jeclahay bandhiga laakiin runtii waxaan dareemay in Irwin uu qaatay qatar aan caadi aheyn.
Ustaraaliya waxay weyday wiil cajiib ah oo midab badan. - Raiisel wasaaraha Australia John Howard
Waxaan xasuustaa daawashada hal show oo Irwin uu ka qaniinay mas uu garan kari waayey shaqaalihiina oo dhami waxay dib ugu ordeen gawaaridooda si loo ogaado inay sun tahay iyo inkale. Ma ahayn, laakiin taasi waa markii aan go'aansaday in Irwin uu qaatay qatar aad uga fog aadanaha caadiga ah. Waqtigu markuu sii soconayo oo aad sii wadid inaad halista iska difaacdo, miyaanay ahayn wax dabiici ah inaad qatar badan gasho?
Hadduusan qaadin khatarahaan, waxaa laga yaabaa inuusan u soo jeedin sida ugu badan ee sababtiisa ah. Si kastaba ha noqotee, kama caawin karo laakiin waxaan la yaabanahay haddii ay u qalantay. Si kastaba ha noqotee, Irwin wuxuu hadda u shahiiday deegaanka iyo dabiiciga. Irwin waxaa dilay sababtii uu u jeclaa uguna noolaa inuu dunida wax ka baro.
Raiisel wasaaraha Australia John Howard ayaa lagayaabaa inuu sifiican uga hadlay musiibada asaga oo leh "Australia waxay lumisay wiil cajiib ah oo midab leh."
La cusboonaysiiyay: Sheekada Sidney News
Mararka qaar waan qoslaa!
Ha iska indha tirin u hogaansanaanta, is waafajinta, iyo barnaamijka wanaagsan